Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चीनतर्फ पनि सीमा विवाद – Emountain TV
काठमाडौं, २३ कात्तिक । चीनसँगको सीमाबारे विवाद भएको खासै बाहिर आउँदैन। पहाडी र विकट हिमाली क्षेत्र भएकाले चीनसितको सीमा–विवाद बाहिर नआएको मात्रै हो। नापी विभाग महानिर्देशक प्रकाश जोशीले दुई ठाउँमा सीमा विवाद रहेको बताए। उनले सगरमाथाको उचाई, दोलखाका पर्ने ५७ नम्बर पिलरमा समस्या रहेको स्वीकार गरको छन्। नेपाल र चीनको सगरमाथाको उचाइबारे पनि एकमत छैनन्।
नेपाल–चीन सीमाका अन्य ठाउँमा सामान्य विवाद छन् भने झण्डै आधा दर्जन सीमा स्तम्भ बेपत्ता भएका छन्। नेपाल–चीन सीमाको लम्बाइ एक हजार चार सय १४ किलोमिटर छ। पूर्व सिक्किम सीमादेखि पश्चिम लिपुलेकसम्म ६९ वटा सीमा स्तम्भ बनाइएका छन्। तीमध्ये सन् २००५ मा भएको सुपरीवेक्षणमा ३७, ३८, र ६२ नम्बरका स्तम्भ भेटिएका थिएनन्। ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छ। त्यहाँ सन् १९७८ मा सीमांकन हुँदैदेखि स्तम्भ भेटिएको थिएन। सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा रहेको ६२ नम्बरको स्तम्भ पनि छैन। ६२ नम्बर पिलरपछि भेटिएको नापी विभाग स्रोतले बताएको छ।
ठूलो समस्याचाहिँ ५७ नम्बर स्तम्भमा छ। दोलखाको लामाबगर पूर्वपट्टिको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा हुनुपर्ने स्तम्भ पहाडको फेदमा छ। सन् १९७८ सीमांकन गर्न जाँदा उक्त स्तम्भ नभेटिएको सीमाविद् पूण्यप्रसाद ओलीले बताए। ‘कोर्लाङपारिको टुप्पोमा पिलर भेटिएन, नेपाल–चीन सन्धिअनुसार टुप्पो हेरियो तर यहाँ थिएन,’ त्यसबेला एरियल फोटोग्राफीबाट सीमांकन गर्न खटिएका ओलीले भने। उनी नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पनि हुन्।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
शनिबार, २३ कार्तिक २०७६
ट्रकले किच्दा १४ वर्षिय बालकको घटनास्थलमै मृत्यु
महरा र पोखरेलको वडामा कांग्रेस दोब्बर मतले विजयी
एम्बुलेन्स र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा ७ जनाको मृत्यु (नामसहित)
चितवनको खैरहनी नगरपालिकाका दुवै वडामा कांग्रेस विजयी
उपनिर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेलाई कारवाही गर्ने देउवाकाे चेतावनी
सरकारले सपना बाँड्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिलाई प्रोत्साहन दियो : अर्जुननरसिंह केसी
पर्यटनको विकासका लागि प्राकृतिक र मानव निर्मित संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण : उपप्रधानमन्त्री
‘नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल आवश्यक’
‘झोले डाक्टर’ले लिए ५ जनाको ज्यान
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग फेरि मागे बढी शुल्क
मानव बेचबिखन सञ्जाल सक्रिय, अलपत्र पार्ने क्रम बढ्यो
बल ब्वाई बने च्याम्पियन
लागूऔषधमा बालबालिका भरिया
नेपालसँग सैन्य सहकार्य बढाउन अमेरिका इच्छुक
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : २४ वर्षदेखिको सपनामा सर्वोच्चको धक्का